Walaloo haadha pdf
Category Walaloo haadha pdf
Archive by category "Walaloo haadha pdf"
by Vujin Oct 2, 2012 Comment
A heartwarming song by Oromo legend Abito Kebede dedicated to his mother. Fageenya na dhowweef malee, Si yaadu hin dhiifne haadha koo, Maalin godhaa garuu? Fageenya na dhowweef malee, Si yaadu hin dhiifne aayyoo koo, Maalin godhaa garuu?
Fageenya na dhowweef malee, Si yaadu hin dhiifne deessee koo, Maalin godhaa garuu?
It is an expression of love for both his countrymen and his country as well as a celebration of the diversity of Oromo culture. This is a traditional folk song from the Wallaggaa region of Oromia. It is typically sang by a guy to a girl in the communal Wallaggaa style of dancing in a circle around the singer. If you have any traditional folk songs that you want me to post please send them to me, especially from regions other than Wallaggaa because my knowledge is very limited when it comes to that.
Damee koo kottu akka taanu, Yoomilee gargar hiin baanu, Damee koo kootama boyee, Dabalee dheegee jalesaa, Watilee soolana ijoollee, Damee koo eegdee dandessa.
Amhara jechaan Wolloodha, Wollo gadjalaan arreeda, Magalaa jechaan qaloodha, Qaloo akka Gadaa maseena. Abbaan kee dheeraa gabaaba, Ijja saani keessa malee?? Haa ijaaru abbaan ijaaree Ani hin dhisu dagalee koo Haa hinaafu abbaan hinaafe Ani hiin dhisu jalalee koo. Dachee keerraa margee. Kan sittii baqateef, Kan sirraa dhalatees.
Maaloo, ya ilmaan koo quxusuu, Maaloo, ya ilmaan koo hangafaa, Maaloo, ormayyuu guddisee, Dabarseefi boonsee, Maa dabaree dhabaa, Jette Oromiyaan, Jette harmeen boossee. Jiituu boonaaf gannaa, Kan uumamaan toltee, Jannata ardiittii, Kamtu siin qixxaatee?
Biyya too Oromia, biyya sirna gadaa, Kan ittiin beekamtuu, mallatoon ishii odaa, Anis biyyan qabaa, kanan ittiin dhaadadhuu. Biyya too Oromia, kan an jiruuf abdadhuu.
Baddaa fi gammoojjii, gaarraniif raarotaa Kan ormaa ni quufa, haadha beeyladootaa Haadha beeyladootaa. Gosti shimbirroolee, kan halluun faayyamtee Bineyyiin adda addaa, bosona ishii guutee Bosana ishii guutee.
Walaloo gabaduu harme koo si yaddee
Biyya too Oromia, biyya sirna gadaa, Kan ittiin beekamtuu, mallatoon ishii odaa, Anis biyyan qabaa, kanan ittiin dhaadadhuu, Biyya too Oromia, kan an jiruuf abdadhuu. Ittiin bulmaatni ishii, seera abbaa gadaattii Dimokraasiin mara, ilmaan ishii haammattii ilmaan ishii haammattii. Teessoo na gaafannaan jedheen Oromiyaa, Dhiiga lafee tiyyaa, Biyya abbaa kiyyaa.
Namni abbaa malee hin dhalatuu, Biyyan qabaa kan na boonssiftu, Onnee tiyyaa, Tiruu tiyyaa. Aadaa hayyuu, ogeessa maraa, Yaa jaalatamtuu, biyya goototaa, Eebbifamtuu, biyyee biyyarraa, Ya Oromiyaa, fakkee jannataa.
Ana kankee, an ilmikee dhufaan jiraa, Hammasittuu salaamataa Ana kankee, tokkichikee dhufaan jiraa, Hammasittuu salaamataa.
Dargaggoon kee, mammagaallanii, Dhedheeroo afroo, mudhii sinnaaraa, Shamarran kee, babbareedina, Ilkeen aannaanii, wayyaan areeraa. Arjoomakee, an oggayyuu na mararaa, Akkam godheen, sirraa turaa, Arjoomakee, an oggayyuu na mararaa, Akkam godheen, sirraa turaa.
Posts Ask me anything Archive. Damee koo kottu akka taanu, Yoomilee gargar hiin baanu, Damee koo kootama boyee, Dabalee dheegee jalesaa, Watilee soolana ijoollee, Damee koo eegdee dandessa, Amhara jechaan Wolloodha, Wollo gadjalaan arreeda, Magalaa jechaan qaloodha, Qaloo akka Gadaa maseena, Abbaan kee dheeraa gabaaba, Ijja saani keessa malee?? Anonymous asked: Abbaan lafaa dhabe lafasaa- Shukri Jamal.
Got it :. Thank you!! Can you please send us a link to the video? Anonymous asked: I would like to have the lyrics of Tadele Gemechu, Hintegnumaa. Anonymous asked: Hi, akkam. Can u do Maalan Jura by Haacaalu Hundeessa?
Yes, will do! Anonymous asked: First of all thank you for what you doing! I wanted to see if u can write the lyrics for ya Biyye by tajuddin Ahmed and Master plan by Caala bultumeIlmaan namaa Maaltu isin facaasaa? Ofii koof jiraadha yoom siree sii afaa jibbitus jaalattuus jiruu tiyya oofaa anis anuma kaa atis sima malee hamattus eegeedha situ duuba oolee ana jaallattullee maal kankee naa gootaa ana jibbitullee mee maal ana gootaa?
Eenyummaa kankee sa maliif dhooysitaa? Ani Caaltu jadhii dhugaan hunda caaltaa, Ani Boontu jadhi saba keetiin boontaa, Oromoo tahuu kee maaliifi dagattaa? Eenyummaa kee ibsi maaliif if qaanfatta. Shamarree oromoo dargaggoo oromoo wal barbaanna qomoo kan kaabaa kan kibbaa itti fufe diddaa gabrummaan abidda dhaami maaf nadiddaa farra lammii kiyyaa jedha qeerroon biyyaa walabummaaf iyyaa nutis haa birmannu yaa shamarree biyyaa yoo kana raawwanne ishooooooooooo bagan naaf magartan isin ilmaan kiyyaa jettii ofiin boonti oromiyaa harmeen tiyyaa!!!!
Qabsoo bilisummaf nutis gabnu fageessinee barree falmaaf haa dhaabannu nutis yaa shamarree oromiyaa aayyoon nuun haa boontu amaarree!!!!! Waa si qofa miti Guuza afeerrattee, Tafkii fi tukaana Injirees yaammatte, Qiinqiinif injijii Qaama na gad dhifte, Wayyaaleedhas fiddee Miila na bobbaafte, Ajjata na kuttee, Arraas osoo jettu Shilmii narra shuumte.
Way dhiiguma kiyyani Akkan cululuyxee. Kaniin ani boohu Laalte natti seeyxa, Garaan koo agabuu Ati quufte burrayxaa, Humna too cabsitee Na dhoorkite buxaa, Akkaan tasgabbooyne Suuta na qunxuuxxaa, Akka ilmoo bineensa Beeka na tuttuyxaa, Akka yataamaatti Hinniyyaan na riiyxa, Nagaya nan laattu Hoggayyuu na jeeqxa, Amma booda gahee Aniis dadhabadhee Summinin sin fixaa.
Si malee tan biraa naan taatuu an arkee, Siitu onnee tiyyaa fudhatee na dhoorkee, Yaa jaalallee firaa naaf tahee haalli kee, sirraa qaabameen jira ani amman if beekee, Jaalalti naaf duraa an qabamuu koon of shakkee.
Haalaaf amala gubbaan bareedina fuulaa, Ijji tee goobanaa nyaarri keetiis kuulaa, Uumamni kee guutuun baayyee nama tolaa, Baareedduu akkanaa jaalachuun kennaadhaa, Sii dhabuun na miidhaa wal dhabuun carradhaa, An sii dhabuun fadhuu siitu naaf qaroodhaa, Si malee naan taane si argachuun fadhaa, Onnee koo guutun dhugaan si jaaladhaa. Jaalala si gaafachuun maaf si tahe baasa, Siin jaaaladha jachuun maalumaaf si aarsaa? Tuffiin qabdu beeki jaalalti badhaasaa, Gammachuun qeebaluun dhugaatti beekumsaa, Jaalala teetiitu onnee kootitti dhimmisaa, Gubee na boobeessa laphee tiyya keessaa, Siin jaaladhaa kootif maa funyaan ol qabdaa?
Niihuu jaalatamnaan boona samii riiydaa, Carraa arra kana boruu immo ni dhabdaa, Hangumaa ammaati boonte qoma dhiibdaa, Foon fuula fixattaa wagga lama boodaa, Kan si laalun jiruu sareetti of herreegdaa. Isiin hin barbaannuu Nu maal walii qabnaa?
walaloo afaan oromoo pdf
Malaa nun dhoorkinaa Nutuu nii beekkannaa. Burqaan keenya gargaarii Horteen teenyaa addaa, Arra eessaa dhuftee Harayaa nu fiddaa? Nu dhiisaa lakkiisaa, Boqonnaa nuuf laadhaa, Waan keenya maraahuu Harka irraa fudhadhaa, Sodaaf hin calliifnee Tana ammo hubadhaa, Ammaa booda gahee Jarana bekkaadhaa, Leencii aaree lolee Mee duraa maladhaa, Goda duraa seenta Yeroon barbaaddadhaa. Sa akkas hin jennee, Dhugaa jiruu dhiifne, Maa soba akeekne?Wednesday, February 20, "Anaa Jejeeqxanii". Kan garaako kesaa ifaann yoon dubadhee Kann natti dhaga'amee fulduraan ibsadhee Hikaamee bilisaan fayyumaa jiraanaan Akka namaa otto ta'iin anni offikoo tanaan Malookaa nadhisaa anaa nan borccinaa samuu mataakotttin anii yaduun fedhaa isaan ummamefis ta'een darbuun fedhaa Mallifi dhiphatee bay'ee offi dhiphistee Matta gaddi cabsatte boqqun gaddi siccabee?
Mallifimoo bossa abbdiihoo kutattaa Gannamafii galgalaa offitti waammataa? Gaduumma offi qabdee offimo tuffataa Naggan sirraa fagaatee hirribamo dhabdaa Barrakee marrasaa mallif gutaa gaddaan?? Laffa laffa ilaalaa yadoon waxxalammaa Guttukee daggatee hir'umaakee xinxxallaa Gammachu fagessaa gaddaffi karra bannaa Biffakee geddartee kanbirra wayyi tattee Yaddoo ofif umtee yaddaa qoffan guttee Gaaffi tokko kastee gaffi tokko geddartee kaann ta'uu hintannefi maallif waxallamtee???
Kann ta'uu hinta'aa kaan hin tane ta'uu Ta'uu yeroo qabuu yerosaaf hataa'uu Atti garu kan ta'u qabdufii ta'unkee hin oluu Kanni hin ta'amnee tatee kan hin tanne hin ta'iinitti Nagaa offif kenni kessakeef eggadhuttii Akkaa siif akkakekametti billisaan jiraataa Qillesaa qulqulaa'aa serumaan baffataa Isaa xuraa'eemo offi kesaa darbataa Mee akkasiin jiradhuu takaa allagarfataa!! Ollanimaa bullun Yaddo Gudda tahee.
Gammachuun dhallaa namma irraa sirriima faggatee. Afurrumaa kuttachuu dhiphinattu tehee Ann garu ann garuu. Mana Waqqayoo. Demnaa Jennan. Nan gammaddee Mannaa isaa naaf wayyaa. Manumaa abbakoo. Burqqaa gammachukoo. Maddaa alagarfikoo.! Hmmmm hmm hm….
Atti hunkutoftee karraa annaf bante. Jirrenyaa lubbukof kessa debbi umte. Fayyinna isaa hankee harkakotti kennite. Gadoddi gaddodee nirawatee jettee….
FAA’IIDAA FAYYAA WALQUNNAMTIIN SAALAAN FIDU Haadha manaatifii Abbaa Manaa qofaaf
Ergaa annaf jechaa offi off kennitee. Bakkakoo cinninsuu iyyan cinninfatee. Boqqun gaddi siccabee annaf lafaa ilaltee. Bellaf dhebuu argitee ergaa dallachoftee. Malliree …manni! Mallifaan nagadda nabohaa kessikoo. Boqqun koo maaf na naccabbaa. Himmimman naccobaa. Anni simboo dhabee mafan tibbirbbiraa. Bakkakoo dagadhee bakee mafan labbaa.
Kessikoo naborahee nagaa mafaan dhaabaa…. Ergaa wantii hundumtuu siittin naf rawwatee. Cuphukoo marasaa dhigaan narraa dhiqxee. Bakka kuffu kotti olfuttee nadhabdee.Oromo News. African News. Formerly Oromia Quarterly. Kitaabotii ABOn ittiin barsiisaa ture hedduu hedduu dha. Kana yeroon ergu kitaabni ijoolleen dirree turan waggaa 35 dura ittiin barachaa turan kana qofa jechuu osoo hin taane hedduu hedduu dha. Quuluu Bareedaa 2.
Hilleessa, 3. Abbaa guddoo 4. Barreeffama qubee jedhchootaa 5. Qubee Afaan Oromoo sadarkaa 1ffaa, sadarkaa 2ffaa hamma 5ffaa fi kaanis hedduu hedduutu jira. Risaafi ruumuichi Joobirris kaateetuu garaa Waaqaa keessa Cabsee alanfatee balleessuu barbaadee gayyaafatee qeensaa. Lukkuun jinnii kaatee isheen jibbisiistuun ilma namaaf diinaa Huummoon raqa nyaattuu ilbisa bosonaa hundumashee beeknaa.
Simbirri daaloteen gamanaa fooriccee nagaa booressitee Oduu hololaafi isa madda hinqabne walitti odeessitee. Cirriin saawwan keenya ittuma ejjettee dhiiga isaanii xuuxxu Warreen nuguggubdu nurraan galagaltuu ykn nurraa hincittuu? Jetteetu gugeenkoo gugeen miilla calii dubbatti gaararraa Dhufunshee dirqama faajjii fannifattee teessee adda leencaarraa. Gugeen yoomuma dhufti faajii bilisummaa ciniintee baadhattee Ijoolleen kee marti dhufaatiikee dhaggeefatu gurri dhadhaabbatee!
Qalbii cabe suphuuf kutannoon hojjettee Ilbiisota mara boollatti ukkaamsitee kaanis injifattee. Simbirroon dhokattuun maqaanshee jibbame mormi jalli diimaa Magariisa uffattee odaan faayamteetu labsii nagaa himaa. Dheebuu cimaan qabaam beekuuf argamakoo Si eegaanoo jiraa yoom dhuftaa Gugeekoo? Dhugaadha nan fayyee aannanuman dhugee Maalin dubbiseeree Akka harma haadhaan itti jedhe luugee….Iilkaan mutaan seene budaan seene" "Moluu tiyya boruufuu si'abdadhe" jedhe jaarsi aduun mtaa dhoofte.
Mammaaksonni Oromoo kan ummata Oromooti. Qeesii mataa sabbataa Amajaaja dabboo sanbataa jedhu. Gonfoon calqaba baddeet dhoofnan kutaa hanqatte. Gogaa naaf hafaa jedhe waraabessi biyya isa hinbeekne dhaqee. Hriyaan garaa walii hin beekne malkaa ceetu maratti walkaksiifti.
Hiriyaa garaa firaa gadheetuu garaa hiraa. Boriif boorri jiraa. Garbbittiin gargaarsa argatte majii dhoksittii. Hamman sii massakkare beettaa jennaan, hamman si tajjabee beettaa itti jedhe jedhu. Bitaan yaabanis mirgaan yaabanis waligeenyi kooradhumaa.
Sabab jette ballaan farda yaabdee. Ijoolleen gajee torbaa anatuu keessaa korma jedhee geerare namichii jedhama. Qeesii mataa sabbataa Amajaaja dabboo sanbataa jedhu Haalle luyyaa Yaa rabbi sooressa ajjeesi, Nyaannee dhugnaa jedhee abbateen taskaara yaade jedhuu. Aaki Jedhan waa tufan Mammaakan waa himan Miila lama qabaataniif muka lama hin Koran Qottoon maal nu godhe, kan nu miidhe muka keenya isa jallate dha jedhan mukoonni jigan jedhan.
Yoo hundumasaa dubbatan garaan duwwaatti hafa jedhan. Yaa marqaa si afuufuun si liqimsuuf jedhan. Ituu beeknuu hubaa wajjin nyaanna jette sareen jedhan. Mana eegaan bara eega jette sareen jedhan. Akka garaakoo jette sareen nama gararraan bishaan dhugdii jedhan. Biddeen nama quubsu eelee irratti beekuu jedhan. Akka abaluun sirbaan boquu nama jallisa jedhan. Akka abaluun sirbaan morma nama jallisa jedhan. Eee amma naaf ifee jedhe maraatan mana gubee. Lafa rukutanii maggaanyaa ofiin qixxeessu jedhan.
Kopheen muka yaabdee seexanatu na kuffise jettaa jette seexanni jedhan. Firaan boonu malee firatti hin boonan. Harreen ofiifuu hingaltuu loon galchitiiree? Midhaan dura facaasan sinbirri nyaattet nama dura dubbate namni komata.
Boru hin beeneen qodaan bukoo ishee lama! Argaa toleef goromsi hin ottoomu! Sareen namaan buluuf udaan namaa nyaati! Kan kunootii hiin argine kuunnotii hin argu!
Kan harree hin qabne gaangee tuffata! Abbaan daadhii dhugeef ilma afaan hin urgaayu! Akka ormaa sirbaan morma nama jallissa! Kana ceenaan lagin hin jiru jette haatikoo! Akka jedhan dhageetee shaniin gufufaan deete! Harkaan dhaabanii barbareen nama gubdi!Obboloota keenya kabajamoo Itoophiyaa keessa jirtan Kitaaba xiqqoo kana gaaffii kabajamoo Obbo Zaman Indaalee Tajaajila Raadiyoo Sagalee dhugaatiin isiniif kennuuf carraa argachuu kootti baayyeen gammada.
Wanti as keessatti dhihaatu barreeffama fuula dhibbaatamaa toora weebsaayitii kootii www. Achumaan dhugaawwan Macaafa Quqlulluu keesatti ibsaman itti fufnee jalqabarratti haala Waaqayyoo, isa jalqabumaa kaasee jiraatee fi Macaafa Quqlulluu harka namootaatiin oomishee ilaalla. Kanaafuu jireenya keenya hafeef barataa dubbii Waaqayyoo taanee of wareeguun Waaqa isa cubbamoota akka keenya dhiiga Isaa isa cubbu-maleessaan baraaruuf ilma Isaa nuuf erge kutannaadhaan Waaqeffachuu fi tajaajiluutti haa seennu.
Sagalee Waaqayyootiif akkuma xiyyeeffannaa kennitanii fi akkuma itti deddeebitaniin eebbifamaa. Garba keessanii fi barataa Sagalee Waaqayyoo, Noormaan Manzoon. Kitaabonni adda-addaa yaada wal-faalleessaa qaban danuun biyya lafaarra in jiru. Macaafin Qulqulluun garuu odeeffannoo walfaalleessu wayii kan hin qabneedha. Gaggeessaanis maarree dhugumattuu hafuura gadi baafachuudha. Duulli hedduun Macaafa Qulqulluu irratti taasifamaa turaniiru. Jijjiiramin wayiituu gonkumaa hin jiru.
Waaqayyo ofuma Isaatiin jiraata. Haalli jireenya Isaa jireenya uumama kan biraa wajjin walitti dhufeenya kan qabu miti Uma. Walumaagalatti namummaa qabaachuuf wantoota sadiitu barbaachisu jedhamee yaadama, Waaqayyos hundasaaniiyyuu qaba. Dandeettii sammuu waan hunda qabuu: dandeettii yaaduu, sababaa fi karoora Isaayyaas Fedha: dandeettii haala gochaa filuu Uma. Waaqayyo sadii Waaqa Tokko. Waaqayyo iddoo hundattuu in argama.
Inni wanti tokkoyyuu otuu Isa hin daangeessin wantoonni hundiyyuu otuu haala Isaa hin hidhin raawwachuuf daangaa malee humna kan qabuudha.Ilmii namaa wantoota isaaf barbaachisu keessa inni tokko walqunnamtii saalaa dha.
Hormoniin Oksitoosin yeroo tokko tokko love hormone ykn Hormonii Jaalalaa jedhamee beekama. Hormooniin kun qaama keenya keessatti yoo baayyinaan argame, waraansa pain garaagara fi dhiphachuu sammuu fi wantoota adda adda irraa nu ittisa. Qoricha hirribaa fudhachuurra qunnamtii saalaa raawwatanii rafuutu irraa filatamaa dha jedhu doktoroonni heddu. Qunnamtiin Saalaa sammuu keenyaf aara galfii dha.
Fedhii Saalaa Dabala Increased Libido Dhiirotni rakkoo fedhii saalaa qabaniif furmaatnisaa, yeroo yeroo dhan qunnamtii saalaa raawwachu yaalu dha. Kuniis maashaalee afuffaa fincaani jalatti argamu humna ykn irree itti horata. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Please select a letter from the index above to see entries.
Design by: Qubee Technologies oroict. Sunday, April 12, Maxxansa Haaraa. Irreecha: Sirna Irreechaa namoota jaha irraa hanga miiliyoonota hedduutti.
Oromoo Gorsa. Hamma Dubbifame: 7, Faaruu Loonii — afaan-oromoo. YAADA 1. Maaloo yaada kee barreessi. Maqaa keessan galchaa. Ergaa dogoggoraa galchite. Leave this field empty. Nu Hordofaa. Maxxansaalee haaraa.
Afaan Oromo - December 6, 0.
Arena vs speedo sizing
Convert any image to mnist image 28x28
Uv wand campaign
Angular 6 country dropdown with flags
Appartamento arredato con 4 locali in affitto
12a supercharger kit
Zolora October 2, 2012 at 10:12 pm